Miambena Satria Te Handrapaka Anao i Satana (1 Petera 5:8)
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Mooré Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany)
‘Miambena satria ny Devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady olona harapaka.’—1 PET. 5:8.
AHOANA NO AMPISEHOAN’I SATANA FA...
1. Ahoana no nahatonga ny anjely iray ho lasa Satana?
NIFANDRAY tsara tamin’i Jehovah izy tamin’ny voalohany. Tiany hivavaka aminy anefa ny olona, tatỳ aoriana. Tsy nesoriny tao an-tsainy io fanirian-dratsy io fa nokolokoloiny sy navelany hitombo, ka lasa nanota izy. (Jak. 1:14, 15) I Satana io anjely io. “Tsy nifikitra tamin’ny marina” izy fa nikomy tamin’i Jehovah ka lasa “rain’ny lainga.”—Jaona 8:44.
2, 3. Nahoana ilay fahavalon’i Jehovah lehibe indrindra no antsoina hoe “Satana”, “Devoly”, “menarana”, ary “dragona”?
2 Lasa fahavalon’i Jehovah lehibe indrindra sy fahavalon’ny olombelona i Satana taorian’ny nikomiany. Hita amin’ny anarany fa tena ratsy fanahy izy. “Mpanohitra” no dikan’ny hoe Satana. Midika izany fa tsy manohana ny fitondran’i Jehovah izy. Ankahalainy sy toheriny mafy kosa izy io ary tena tiany horavana.
3 Antsoin’ny Apokalypsy 12:9 hoe Devoly i Satana. Midika hoe “Mpanendrikendrika” ny hoe Devoly. Nilaza mantsy izy fa mpandainga i Jehovah. Antsoina hoe “ilay menarana tany am-boalohany” koa izy, satria nampiasa menarana mba hamitahana an’i Eva, tany Edena. Biby be mampihoron-koditra kosa no tonga ao an-tsaina amin’ny hoe “dragona lehibe.” Mety tsara amin’i Satana izany satria lozabe izy, ka manao izay ho afany mba tsy hahatanteraka ny fikasan’i Jehovah sy mba hamongorana ny vahoakany.
4 I Satana àry no atahorana indrindra hampivadika antsika amin’i Jehovah. Rariny raha mampirisika antsika ny Baiboly hoe: “Aoka ianareo hisaina tsara sy hiambina, satria ny Devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona, mitady olona harapaka.” (1 Pet. 5:8) Handinika toetra telo mampiavaka an’i Satana isika. Ho hitantsika fa tena ilaina ny miaro tena amin’io fahavalon’i Jehovah sy ny vahoakany io.
MAHERY I SATANA
5, 6. a) Inona no porofo fa “mahery dia mahery” ny anjely? b) Nahoana i Satana no lazaina fa “manan-kery hahatonga fahafatesana”?
5 “Mahery dia mahery” ny anjely. (Sal. 103:20) Ambony noho ny olombelona izy ireny ka mahay kokoa sy matanjaka kokoa. Mampiasa ny heriny hanaovana zavatra tsara ny anjely tsy mivadika. Iray tamin’ny anjelin’i Jehovah, ohatra, dia nahafaty miaramila asyrianina 185 000. (2 Mpanj. 19:35) Tsy vitan’ny olona iray izany, ary na tafika iray manontolo aza ho sahirana vao hahavita izany. Nampiasa ny heriny sy ny fahaizany koa ny anjely iray, indray mandeha, mba hanafahana ny apostolin’i Jesosy tao am-ponja. Vitany ny nanokatra ny varavarana, namoaka an’ireo apostoly, ary nanidy ny varavarana indray, na dia teo akaiky teo aza ny mpiambina.—Asa. 5:18-23.
6 Tsy toa an’ireo anjely tsy mivadika kosa i Satana, fa mampiasa ny heriny hanaovan-dratsy. Tena mahery izy sady misy vokany be ny zavatra ataony. Milaza ny Baiboly fa izy no “mpitondra an’izao tontolo izao” sy “andriamanitr’ity tontolo ity.” (Jaona 12:31; 2 Kor. 4:4) “Manan-kery hahatonga fahafatesana” mihitsy aza izy. (Heb. 2:14) Tsy midika izany hoe i Satana foana no mahatonga ny olona ho faty. Miely eran-tany kosa ilay toe-tsainy tia mamono olona. Niely tamin’ny olona rehetra koa ny ota sy ny fahafatesana, satria nino ny laingan’i Satana i Eva ary tsy nankatò an’Andriamanitra i Adama. (Rom. 5:12) Izany no antony ilazana hoe “manan-kery hahatonga fahafatesana” ny Devoly. Izy ilay nantsoin’i Jesosy hoe “mpamono olona.” (Jaona 8:44) Fahavalo mahery tokoa i Satana!
7. Inona no manaporofo fa mahery ny demonia?
7 Rehefa manohitra an’i Satana isika, dia manohitra an’ireo rehetra tsy manaiky ny zon’Andriamanitra hitondra koa. Anisan’izany ny anjely maro be mpikomy, antsoina hoe demonia. (Apok. 12:3, 4) Efa imbetsaka izy ireny no nampiseho fa mahery noho ny olombelona, ka nataony nahita faisana izay tratrany. (Mat. 8:28-32; Mar. 5:1-5) Aza hadinoina mihitsy fa mahery ny demonia sy ilay ‘lehibeny.’ (Mat. 9:34) Tsy handresy an’i Satana mihitsy isika raha tsy ampian’i Jehovah.
LOZABE I SATANA
8. a) Inona no fanirian’i Satana? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.) b) Inona no zavatra hitanao ka mampiseho fa tena lozabe toa an’i Satana ity tontolo ity?
8 Nampitovin’ny apostoly Petera tamin’ny “liona mierona” i Satana. Resahin’ny boky iray fa ilazana ny “feo ataon’ny bibidia noana be” ilay teny grika nadika hoe “mierona.” Mahalaza tsara an’i Satana izany satria lozabe izy. Efa eo ambany fahefany ity tontolo ity nefa mbola mitady olona harapaka ihany izy. (1 Jaona 5:19) Toy ny tsindrin-tsakafo fotsiny ity tontolo ity aminy. Ny sisa voahosotra sy ny “ondry hafa” kosa no tena sakafony. (Jaona 10:16; Apok. 12:17) Tian’i Satana raha tsy misy olona manompo an’i Jehovah intsony. Hita fa lozabe izy rehefa jerena ny fanenjehana misesisesy manjo ny Kristianina, nanomboka tamin’ny taonjato voalohany ka hatramin’izao.
9, 10. a) Inona no nataon’i Satana mba hamelezana ny Israely? (Manomeza ohatra.) b) Nahoana ny Israelita no tena nokendren’i Satana? d) Araka ny hevitrao, inona no tsapan’ny Devoly rehefa misy mpanompon’i Jehovah manao fahotana lehibe?
9 Misy zavatra hafa koa ahitana fa lozabe i Satana. Tsy miantra an’izay biby azony ny liona noana. Tsy mangoraka an’ilay biby izy sady tsy manenina rehefa avy mamono azy io. Tsy mangoraka an’izay tratrany koa i Satana. Inona, ohatra, no tsapany isaky ny nisy Israelita voataona hijangajanga sy hitsiriritra? Nijangajanga i Zimry ary nitsiriritra i Gehazy ka samy nijinja vokany ratsy. Rehefa mamaky ny tantaran’izy ireo ianao, azonao an-tsaina ve ny hafalian’ilay liona mierona noho izy nandresy?—Nom. 25:6-8, 14, 15; 2 Mpanj. 5:20-27.
Faly i Satana rehefa misy mpanompon’i Jehovah manota (Fehintsoratra 10)
10 Nisy antony manokana nahatonga an’i Satana hikendry ny Israely. Io firenena io no hihavian’ny Mesia, ilay hanorotoro an’i Satana sy hanamarina ny zon’i Jehovah hitondra. (Gen. 3:15) Tsy tian’i Satana hahazo sitraka amin’Andriamanitra ny Israelita ka niezaka mafy izy mba hahatonga azy ireo hanota. Tsy nalahelo mihitsy i Satana rehefa nijangajanga i Davida na rehefa tsy navela hiditra tao amin’ny Tany Nampanantenaina i Mosesy. Azo inoana kosa fa faly izy rehefa misy mpanompon’Andriamanitra manao fahotana lehibe. Mandresy izy amin’ireny fotoana ireny ary entiny hanaratsiana an’i Jehovah izany.—Ohab. 27:11.
11. Nahoana i Satana no nikendry an’i Saraha?
11 Ny razamben’ny Mesia no tena halan’i Satana. Diniho izay nitranga taoriana kelin’ny nilazana tamin’i Abrahama hoe ho lasa “firenena lehibe” izy. (Gen. 12:1-3) Tamin’i Abrahama sy Saraha tany Ejipta, dia nentin’i Farao tao an-tranony i Saraha, satria saika halainy ho vadiny. Niaro an’i Saraha anefa i Jehovah ka tsy naninona izy. (Vakio ny Genesisy 12:14-20.) Nisy olana toy izany koa tany Gerara, talohan’ny nahaterahan’i Isaka. (Gen. 20:1-7) I Satana ve no nahatonga an’ireo? Tadidio fa nandao an’i Ora, tanàna nanan-karena, i Saraha ary nipetraka an-tranolay. Nety ho nanantena àry ve i Satana hoe hahasarika an’i Saraha ny lapa mirentin’i Farao sy Abimeleka? Nanantena ve i Satana fa hivadika amin’ny vadiny sy amin’i Jehovah i Saraha ka hijangajanga? Tsy mamaly an’ireo ny Baiboly. Azo antoka anefa fa faly ny Devoly raha lasa tsy mendrika ny ho razamben’ilay taranaka nampanantenaina i Saraha. Tsy ho nampihontsina azy koa raha rava ny tokantranon’i Saraha, na lasa ratsy laza izy, na lasa tsy nifandray tamin’i Jehovah intsony. Lozabe tokoa i Satana!
12, 13. a) Inona no nataon’i Satana rehefa teraka i Jesosy ka ahitana fa lozabe izy? b) Araka ny hevitrao, inona no tsapan’i Satana rehefa misy tanora na ankizy tia an’i Jehovah sy miezaka manompo azy?
12 Teraka i Jesosy, taonjato maro taorian’i Abrahama. Aza mieritreritra hoe nahafatifaty an’i Satana na tiany i Jesosy tamin’ny mbola zaza. Fantany mantsy fa io zaza io no ho lasa Mesia nampanantenaina. I Jesosy tokoa no voalohany amin’ny taranak’i Abrahama. Izy ilay “handrava ny asan’ny Devoly.” (1 Jaona 3:8) Nieritreritra ve i Satana hoe tafahoatra loatra ny mamono zazakely? Tsia. Tsy miraharaha an’izay tsara sy ratsy izy. Tonga dia nitady hevitra hamonoana an’i Jesosy izy. Inona no nataony?
13 Ren’i Heroda Mpanjaka tamin’ireo mpanandro fa teraka ilay “ho mpanjakan’ny Jiosy.” Tezitra be izy ka tapa-kevitra ny hamono an’ilay zaza. (Mat. 2:1-3, 13) Nasainy novonoina daholo àry ny zazalahy roa taona no ho midina tany Betlehema sy ny manodidina, amin’izay azo antoka fa ho faty ilay zaza. (Vakio ny Matio 2:13-18.) Avotra tamin’ilay famonoana mahatsiravina i Jesosy. Inona anefa no ianarantsika avy amin’ilay zava-nitranga? Hita fa tsy misy dikany amin’ny Devoly ny aina. Na ny ankizy aza tsy mampalahelo azy. “Liona mierona” tokoa i Satana. Aza hadinoina mihitsy fa lozabe izy.
MPAMITAKA I SATANA
14, 15. Inona no ataon’i Satana mba ‘hanajambana ny sain’ny tsy mino’?
14 Tsy mahatarika olona hiala amin’ilay Andriamanitra be fitiavana i Satana raha tsy mamitaka. (1 Jaona 4:8) Ataony izay hahatonga ny olona tsy ‘hahatsapa fa mila an’Andriamanitra.’ (Mat. 5:3) “Manajamba ny sain’ny tsy mino” izy, “mba tsy hamirapiratra amin’izy ireo ny fahazavan’ny vaovao tsara be voninahitra, dia ilay vaovao tsara momba an’i Kristy, izay endrik’Andriamanitra.”—2 Kor. 4:4.
15 Anisan’ny fomba lehibe indrindra amitahan’i Satana ny olona ny fivavahan-diso. ‘Mitaky ny hanompoana azy irery ihany’ i Jehovah. (Eks. 20:5) Fantatr’i Satana izany ka faly erỳ izy rehefa tsy mivavaka amin’i Jehovah ny olona fa mivavaka amin’ny razana sy ny biby ary ny zavatra hafa. Maro koa no mihevitra fa tena manompo an’Andriamanitra, nefa manaraka fampianaran-diso sy fombafomba tsy misy ilana azy. Mampalahelo izy ireny toa an’ireo Israelita fahiny, izay niangavian’i Jehovah hoe: “Nahoana ianareo no mandany vola amin’izay tsy sakafo, ary misasatra amin-javatra tsy mahafa-po? Henoy tsara aho, ary mihinàna izay tsara, ka aoka ianareo hankafy sakafo matavy.”—Isaia 55:2.
16, 17. a) Nahoana i Jesosy no nilaza tamin’i Petera hoe: “Mankanesa ato ivohoko, ry Satana”? b) Inona no mety hataon’i Satana mba hahatonga antsika tsy hiambina tsara?
16 Mety ho voafitak’i Satana na dia ny mpanompon’i Jehovah be zotom-po aza. Diniho, ohatra, izay nitranga rehefa nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy fa efa hovonoina izy. Nitondra an’i Jesosy nihataka kely ny apostoly Petera ka nilaza hoe: “Tokony mba ho tsara fanahy amin’ny tenanao ianao, Tompo ô! Tsy hanjo anao mihitsy izany.” Azo inoana fa nitady izay hahasoa an’i Jesosy i Petera. Hentitra anefa i Jesosy namaly azy hoe: “Mankanesa ato ivohoko, ry Satana!” (Mat. 16:22, 23) Nahoana i Jesosy no niantso an’i Petera hoe “Satana”? Satria fantatr’i Jesosy izay hitranga tsy ho ela. Efa akaiky ny fotoana hamonoana azy ho sorona sy hanaporofoany fa mpandainga ny Devoly. Fotoan-dehibe teo amin’ny tantaran’ny olombelona tamin’izay. Tsy tamin’io mihitsy àry i Jesosy no tokony ho “tsara fanahy” tamin’ny tenany. Tena ho faly i Satana raha tsy niambina tsara izy.
17 Miavaka koa izao fotoana iainantsika izao satria efa akaiky hifarana ny rafitr’ity tontolo ity. Tsy tian’i Satana hiambina tsara isika fa ho “tsara fanahy” amin’ny tenantsika. Tiany hanao izay hahombiazantsika eto amin’ity tontolo ity isika, ka tsy hahita intsony hoe efa akaiky ny andron’i Jehovah. Aza manaiky ho voafitany mihitsy! “Miambena hatrany” kosa. (Mat. 24:42) Aza mino an’ilay laingan’i Satana hoe mbola ho ela na tsy ho tonga mihitsy ny farany.
18, 19. a) Inona no tian’i Satana hinoantsika? b) Inona no ataon’i Jehovah mba hanampiana antsika hisaina tsara sy hiambina hatrany?
18 Misy fomba hafa koa amitahan’i Satana antsika. Tiany hino isika fa tsy tia antsika Andriamanitra ary tsy hamela ny helotsika mihitsy. Lainga aelin’i Satana daholo izany. Iza no tena tsy tian’i Jehovah? I Satana. Ary ny helok’iza no tsy havelan’i Jehovah mihitsy? Ny an’i Satana. Manome toky antsika kosa ny Baiboly hoe: ‘Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino izay nataonareo, sy ny fitiavana nasehonareo ho an’ny anarany.’ (Heb. 6:10) Ankasitrahan’i Jehovah ny ezaka ataontsika hampifaliana azy, ary tsy very maina ny fanompoantsika azy. (Vakio ny 1 Korintianina 15:58.) Aza manaiky ho voafitak’i Satana àry!
19 Hitantsika tato fa mahery sy lozabe ary mpamitaka i Satana. Ahoana no handresena an’io fahavalo mampahatahotra io? Tsy mamela antsika ho irery i Jehovah. Atorony ao amin’ny Teniny ny paikadin’i Satana ka “fantatsika ny teti-dratsiny.” (2 Kor. 2:11) Ho afaka hisaina tsara kokoa sy hahay hiambina kokoa isika rehefa mahalala izany. Tsy ampy anefa ny mahalala ny tetik’i Satana. Hoy ny Baiboly: ‘Tohero ny Devoly, dia handositra anareo izy.’ (Jak. 4:7) Hiresaka fomba telo hanoherana an’i Satana sy handresena azy ny lahatsoratra manaraka.
Hizara Hizara Miambena Satria Te Handrapaka Anao i Satana